ပင်မစာမျက်နှာ / ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ
အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် opskar.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (သို့) ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ops ("ops") ကပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခြားလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ (OPS ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအပါအ ၀ င်) မူဝါဒများနှင့်ဤဆိုက်တွင်ရံဖန်ရံခါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကိုပြုပြင်ခြင်းမရှိပဲသင်၏လက်ခံမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ OPS (စုပေါင်း၊ “ သဘောတူညီချက်”) ။
အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်အားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုခင်ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ Web Site ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ဖြစ်လာသဘောတူသည်။ သင်ဤသဘောတူညီချက်အပေါငျးတို့သစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသဘောမတူဘူးလျှင်, သင်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုငျသညျ။ ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို Ops တို့ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, လက်ခံမှုဖော်ပြသည်ဤဝေါဟာရများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာကအနည်းဆုံး 13 နှစ်ရှိပြီနေသောတစ်ဦးချင်းစီမှရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ opskar.com အကောင့်များနှင့်ဆိုက်။ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ် / site ကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏အကောင့်များနှင့်ဘလော့ဂ်၏လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင် account တစ်ခုအောက်မှာဖြစ်ပေါ်သမျှသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘလော့ဂ်နှင့် ဆက်စပ်. ခေါ်ဆောင်သွားအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ် assign သော့ချက်စာလုံးများသင့်ရဲ့ Blog ကိုတစ်ဦးအထင်မြင်မှားစေသောသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောထုံးစံ၌, တခြားသူတွေရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ဂုဏ်သတင်းအပေါ်ကုန်သွယ်မှုရည်ရွယ်တစ်ဦးထုံးစံ၌အပါအဝင်နှင့် Ops ကမသင့်လျော်သို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောစဉ်းစားဆိုဖော်ပြချက်သို့မဟုတ် keyword ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်မရမယ် Ops တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့မဟုတ်ရင်ဖွယ်ရှိ။ သငျသညျခကျြခငျြးသင့်ရဲ့ Blog ကိုမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှု၏ Ops, သင့်အကောင့်သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအခြားမည်သည့်ပြိုပျက်ရာကိုလည်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။ Ops ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်ကိုမဆိုမျိုးကိုမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်သင်ဟာနေဖြင့်မည်သည့်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်များအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ပံ့ပိုးသူများ၏တာဝန်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပါကဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်မှတ်ချက်ပေးပါ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိလင့်ခ်များကိုတင်ပါ၊ သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် (“ ပါဝင်သည့်အရာများ”) အားဖြင့်ပစ္စည်းများကိုရရှိနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပါ။ ), သင်သည်ထိုအကြောင်းအရာများ၏အကြောင်းအရာနှင့်ထံမှရရှိလာတဲ့မည်သည့်ထိခိုက်မှုများအတွက်လုံးဝတာဝန်ရှိသည်။ အကြောင်းအရာမှာစာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ အသံဖိုင် (သို့) ကွန်ပျူတာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တို့ပါဝင်သည်ဖြစ်စေဤကိစ္စသည်ထိုသို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်က
သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုစာဖတ်သူတွေကိုသင်ဟာအခြားသူ (သို့) ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ထင်မြင်အောင်လှည့်စားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နာမည်မထားပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ဘလော့ဂ်၏ URL သို့မဟုတ်အမည်သည်သင်ကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး ၏အမည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ။ ကွန်ပြူတာကုဒ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများတွင် OPS မှသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုထားသောဖြစ်စေ၊ အမျိုးအစားများ၊ သဘောသဘာဝ၊ အသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိကျစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ Website တွင်ပါဝင်ဘို့ Ops မှအကြောင်းအရာတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, သင်ကကမ္ဘာ့အကျယ် Ops, မူပိုင်-အခမဲ့နှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ, ပြသဖြန့်ဖြူးနှင့်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကြောင်းအရာ, မျိုးပွားပြုပြင်မွမ်းမံ, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ထုတ်ဝေ Non-သီးသန့်လိုင်စင်ချထားပေးရန် ။ သငျသညျအကြောင်းအရာဖျက်ပစ်လျှင်, Ops ဟာကျဘျဆိုကျကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကအကြောင်းအရာမှယာယီသိမ်းဆည်းသို့မဟုတ်ကိုးကားချက်ချင်းမရရှိနိုင်သေးပါလုပ်မရစေခြင်းငှါဝန်ခံ။
ထိုဖော်ပြချက်များ (သို့) အာမခံချက်များအားကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ OPS သည် OPS ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် (i) OPS ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထင်မြင်ချက်အရမည်သည့် OPS မူဝါဒကိုမဆိုချိုးဖောက်သောသို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ကန့်ကွက်သူသို့မဟုတ် (၂) မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆို OPS ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခွင့်ကိုရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခြင်း။ OPS သည်ယခင်ကပေးဆောင်ခဲ့သောမည်သည့်ပမာဏကိုမဆိုပြန်အမ်းငွေပေးရန်အတွက်တာဝန်မရှိပါ
တစ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်, သင် Ops တ-အချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ညွှန်ပြလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေ (အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများသည်အခြားဆက်သွယ်ရေးတွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ) ပေးချေရန်သဘောတူသည်။ subscription ငွေပေးချေမှုသင်တစ်ဦး Upgrade များအတွက် sign up ကိုနေ့ခြင်းတွင်တစ်ဦး Pre-လစာအခြေခံပေါ်မှာတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးညွှန်ပြအဖြစ်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းကာလအဘို့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုသည်အမ်းမရှိကြပေ။
သင်တစ်ဦးစာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ချင်သောသက်ဆိုင်သောကြေးပေးသွင်းကာလမကုန်မီ Ops အကြောင်းကြားမဟုတ်လျှင်, သင့် subscription ကိုအလိုအလျှောက်ပြည့်ကြလိမ့်မည်နှငျ့သငျထိုကဲ့သို့သော subscription ကို (အဖြစ်မည်သည့်အခွန်များ) အတွက်ထို့နောက်-သက်ဆိုင်သောနှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းကြေးစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန် သင်တို့အဘို့အစံချိန်အပေါ်မည်သည့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်သည်အခြားပေးချေမှုယန္တရားကို အသုံးပြု. ။ upgrades အရေးအသားအတွက် Ops ရန်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခကြေးငွေ; ငွေပေးချေမှု။ ၀ န်ဆောင်မှုအကောင့်တစ်ခုသို့စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည် OPS အားသက်ဆိုင်ရာ setup အခကြေးငွေများနှင့်ထပ်တလဲလဲအခကြေးငွေများကိုပေးရန်သဘောတူသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများစတင်ချိန် မှစ၍ ထို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုမီလျှောက်ထားသောအခကြေးငွေများကိုငွေတောင်းခံလွှာတင်မည်။ OPS သည်သင့်အားကြိုတင်အကြောင်းကြားစာကိုရက် ၃၀ (၃၀) အပြီးတွင်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခကြေးငွေများကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ OPS အထောက်အပံ့သို့ရက် ၃၀ (၃၀) အတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ကအချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ဦး စားပေးအီးမေးလ်အထောက်အပံ့ကိုအသုံးပြုပါက။ “ အီးမေးလ်ပံ့ပိုးမှု” ဆိုသည်မှာ VIP ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (OPS ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးပမ်းမှုဖြင့်) မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအီးမေးလ်ဖြင့်နည်းပညာအကူအညီအထောက်အပံ့တောင်းခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဆိုလိုသည်။ “ ဦး စားပေး” ဆိုသည်မှာ standard သို့မဟုတ် free opskar.com ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုသူများကိုထောက်ခံမှုထက် ဦး စားပေးမှုကိုဆိုလိုသည်။ ပံ့ပိုးမှုအားလုံးကို OPS စံဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မူဝါဒများနှင့်အညီထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ဝဘ်ဆိုက် Vis ည့်သည်များ၏တာဝန် OPS သည်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ထိုအကြောင်းအရာ၏ပါဝင်မှု၊ အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် OPS သည်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုထောက်ခံသည်သို့မဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တိကျမှု၊ အသုံး ၀ င်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မပြုနိုင်ဟုယုံကြည်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်နှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုဗိုင်းရပ်စ်များ၊ တီကောင်များ၊ Trojan များမြင်းများနှင့်အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအဖျက်အမှင်များမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်စော်ကားသော၊ မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်အခြားကန့်ကွက်နိုင်သောအကြောင်းအရာများသာမကနည်းပညာဆိုင်ရာမတိကျမှုများ၊ လက်နှိပ်စက်အမှားများနှင့်အခြားအမှားများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သည့်အရာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်တင်ခြင်း၊ ကူးခြင်း၊ OPS သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ visitors ည့်သည်များအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်တင်ထားသောအကြောင်းအရာကို visitors ည့်သည်များမှကူးယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ထိခိုက်မှုကိုမဆိုတာဝန်မယူပါ။
အကြောင်းအရာအခြား Website များအပေါ် Posted ။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မလာကြနှင့်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုအပါအဝင်, ပစ္စည်းအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မနိုင်, အရာလင့်များ opskar.com ဖို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတဆင့်ရရှိနိုင် လုပ်. , opskar.com ကိုလင့်ထားသောစာမျက်နှာများ။ yourcompany သူတို့အား Non-yourcompany ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကျော်မဆိုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်, မိမိတို့အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်တာဝန်မယူပါဘူး။ non-yourcompany က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံ Ops ကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ပါကထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာထောက်ခံသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်, worm, Trojan ဟာမြင်းများနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပြီးတာဝန်ရှိသည်။ Ops Non-ops ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေရရှိလာတဲ့မဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူပါ။
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် DMCA မူဝါဒ။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်အခြားသူများကို၎င်း၏အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်တောင်းဆိုသကဲ့သို့၎င်းသည်အခြားသူများ၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားသည်။ opskar.com မှတည်ရှိပြီးသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောပစ္စည်းသည်သင်၏မူပိုင်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက OPS ၏ဒီဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ (“ DMCA”) မူဝါဒအရ OPS ကိုအကြောင်းကြားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ OPS သည်ထိုကဲ့သို့သောအသိပေးချက်များအားလုံးကိုတုန့်ပြန်လိမ့်မည်၊ လိုအပ်သည် (သို့) သင့်လျော်သည်ဖြစ်စေ၊ ချိုးဖောက်သောပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင် the ည့်သည်သည် OPS သို့မဟုတ်အခြားမူပိုင်ခွင့်များသို့မဟုတ်အခြားဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကိုထပ်ခါတလဲလဲချိုးဖောက်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါက OPS သည် visit ည့်သည်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောရပ်စဲခြင်း၏အမှု၌, OPS ယခင်က OPS ပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏပြန်အမ်းငွေပေးရန်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီမှသင့်အားမည်သည့် OPS သို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏ဥာဏပစ္စည်းကိုမဆိုလွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်အကျိုးစီးပွား (ပါတီများအကြား) OPS နှင့်သာသက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ OPS, opskar.com, opskar.com လိုဂိုနှင့် opskar.com နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးပြုသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် OPS သို့မဟုတ် OPS ၏လိုင်စင်ရသူများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးပြုသောအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုခြင်းသည် OPS သို့မဟုတ်တတိယပါတီအမှတ်တံဆိပ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်သင့်အားအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်လိုင်စင်မရှိပါ။
ကြော်ငြာ။ Ops သင်တစ်ဦးအခမဲ့ကြော်ငြာအကောင့်ဝယ်ယူကြမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကြော်ငြာဖော်ပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သတ်မှတ်ချက်။ OPS သည် 'Blog at opskar.com'၊ ဆောင်ပုဒ်ရေးသားသူနှင့်သင်၏ blog footer သို့မဟုတ် toolbar တွင် font attribution ကဲ့သို့သော attribution လင့်များကိုဖော်ပြရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
မိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ထံမှမိတ်ဖက်ထုတ်ကုန် (ဥပမာဆောင်ပုဒ်) ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကထိုမိတ်ဖက်၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုသင်သဘောတူသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထုတ်ကုန်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့၏စည်းကမ်းချက်များကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
ဒိုမိန်းအမည်များ အကယ်၍ သင်သည် domain name တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယခင်မှတ်ပုံတင်ထားသော domain name တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် domain name ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့ရဲ့ Internet အပါအဝင်သတ်မှတ်ထားသည့်နာမည်နှင့်နံပါတ်များအတွက်အင်တာနက်ကော်ပိုရေးရှင်း (“ ICANN”) ၏မူဝါဒများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ကြောင်းသင်သဘောတူလက်ခံသည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ။
အပြောင်းအလဲများ။ Ops ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း modify သို့မဟုတ်အစားထိုး၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အခါအားလျော်စွာဒီသဘောတူညီချက်စစ်ဆေးသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများ၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူများပြောင်းလဲမှုများလက်ခံမှုရှိပါသည်။ Ops လည်း, အနာဂတျမှာ, (အသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များများလွှတ်ပေးရေးအပါအဝင်) ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ် features တွေပူဇော်ပမေညျ။ ထိုကဲ့သို့သော features အသစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ရပ်စဲခြင်း။ OPS သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားသင်၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေအသိပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သင်၏ opskar.com အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုပါက (သင်၌ရှိပါက) သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ပေးဆောင်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအကောင့်တစ်ခုရှိပါကသင်သည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီး OPS မှအသိပေးစာမှရက်ပေါင်း ၃၀ (၃၀) အတွင်းထိုဖောက်ဖျက်မှုကို OPS မှရပ်စဲနိုင်သည်။ OPS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားပိတ်ပစ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့၏သဘောသဘာဝအားဖြင့်ရပ်စဲခြင်းအားဆက်လက်ရှင်သန်သင့်သောဤသဘောတူညီချက်ပါပြ္ဌာန်းချက်အားလုံးသည်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များ၊ အာမခံချက်ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊
အာမခံ၏ငြင်းဆန်မှု။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို“ ကဲ့သို့” ထောက်ပံ့ပေးသည်။ OPS နှင့်၎င်း၏ပေးသွင်းသူများနှင့်လိုင်စင်ရသူများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်မှုမရှိခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်အာမခံအမျိုးအစားကိုမဆိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်လိုင်စင်ရသူများက ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အမှားကင်းသောသို့မဟုတ်၎င်းအားဝင်ရောက်ခြင်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဟူသောအာမခံချက်ကိုပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အန္တရာယ်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်မှအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအရာများမှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်ပါသည်
တာဝန်ဝတ္တရားများကန့်သတ်။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်ကိုလိမ့်မည် Ops, သို့မဟုတ်၎င်း၏ပေးသွင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရ, အဘို့မဆိုစာချုပ်, ပေါ့ဆမှု, တင်းကြပ်တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်သာတူညီမျှသီအိုရီအောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်မဆိုဘာသာရပ်ကိစ္စမှလေးစားမှုနှင့်အတူထိုက်ဖြစ်ခုနှစ်တွင်: (ဈ) မဆို, အထူးဖွစျပှားသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု; (ii) အစားထိုးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဝယ်ယူရေး၏ကုန်ကျစရိတ်; (iii) အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အရှုံးသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြတ်တောက်သည် ဖြစ်. , သို့မဟုတ် (ဃ) ကြိုတင်အရေးယူမှုများ၏အကြောင်းရင်းမှတကျိပ်နှစ်ပါး (12) လကာလအတွင်းကဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာ Ops ရန်သင့်အားဖြင့်ပေးဆောင်သည့်အဖိုးအခထက်ကျော်လွန်ကြောင်းမည်သည့်ပမာဏသာဖြစ်သည်။ Ops ဆိုပျက်ကွက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ကိစ္စရပ်များကြောင့်နှောင့်နှေးမတာဝန်ယူမှုရှိရလိမ့်မည်။ အဆိုပါအထက်ပါသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသောအတိုင်းအတာလျှောက်ထားရမည်မဟုတ်။
အထွေထွေကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အာမခံ။ သငျသညျမြို့, ပြည်နယ် (ဈ) ကိုကျဘျဆိုကျသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကဒီသဘောတူညီချက်နှင့်အတူနှင့်သင့်တိုင်းပြည်အတွက်မည်သည့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်း limitation မရှိဘဲအပါအဝင်အားလုံးတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ (နှင့်တကွ, Ops သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကိုယ်စားပြုခိုင်လုံ အွန်လိုင်းအမူအကျင့်များနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. သို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောဧရိယာ, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်သင်နေထိုင်ရသောတိုင်းပြည်ကနေ export နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဂီယာနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများအပါအဝင်) နှင့် (ii) ကိုကျဘျဆိုကျသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်ငြိစွန်းမည်မဟုတ်သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပါတီများ၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ misappropriate ။
လျော်ကြေး။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်မဆိုထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသော OPS, ၎င်း၏ကန်ထရိုက်တာများနှင့်လိုင်စင်ရသူနှင့်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများ၊ အပါအ ၀ င်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။
အထွေထွေ။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည် OPS နှင့်သင်ကြားရှိသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အာဏာရှိသောအမှုဆောင်မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောရေးသားထားသောပြင်ဆင်ချက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပုံစံကိုသင်၏ကုမ္ပဏီမှတင်ခြင်းဖြင့်သာပြုပြင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ မှလွဲ၍ အခြားအခွင့်အလမ်းများပါ ၀ င်သော်လည်းဤသဘောတူညီချက်အား ၀ က်ဘ်ဆိုက်အား ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအား၎င်း၏ပconflictိပက္ခဆိုင်ရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်သင့်လျော်သောနေရာများ မှလွဲ၍၊ အငြင်းပွားမှုများမှထွက်ပေါ်လာသောအငြင်းပွားမှုများသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများဖြစ်သည်။ တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်သာတူညီမျှသောကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုများ မှလွဲ၍ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ တောင်းဆိုမှုများ မှလွဲ၍ (နှောင်ကြိုးမတင်ဘဲမည်သည့်အရည်အချင်းရှိသောတရားရုံးတွင်မဆိုယူဆောင်လာနိုင်သည်) ဤသဘောတူစာချုပ်အရပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုအပြီးသတ်အနုညာတစီရင်ခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြေရှင်းရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းဥပဒေများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောခုံသမာဓိလူကြီးသုံးခုကတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေခြင်းလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှု (Inc) ကို (“ JAMS”) ချမှတ်ခဲ့သည်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ပြုလုပ်ရမည်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုတရားရုံးတိုင်း၌ပြဌာန်းနိုင်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုပြto္ဌာန်းရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင်လွှမ်းမိုးသောပါတီသည်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ဤသဘောတူစာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမမှန်ကန်တဲ့သို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပါကထိုအပိုင်းကိုပါတီများ၏မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေရန်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသေးသောအပိုင်းများကိုအပြည့်အ ၀ သက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ပါတီမှဖြစ်စေဤသဘောတူစာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုခုမှဖြစ်စေ၊ ၎င်းအားဖောက်ဖျက်ခြင်းအားဖြစ်စေမည်သည့်ဥပမာတွင်ဖြစ်စေထိုကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲချိုးဖောက်မှုများကိုပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသဘောတူစာချုပ်အရသင်၏အခွင့်အရေးများကိုသဘောတူလက်ခံသည့်သဘောတူစာချုပ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသဘောတူလက်ခံသည့်မည်သည့်ပါတီကိုမဆိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ OPS သည်ဤသဘောတူညီချက်အောက်တွင်၎င်း၏အခွင့်အရေးကိုအခြေအနေမရှိဘဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ပါတီများ၊ သူတို့၏ဆက်ခံသူများနှင့်ခွင့်ပြုထားသောတာ ၀ န်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။